LLC "Zolotovskoe" yakapfuudza kune muridzi mutsva - Zvinyorwa "Potato System"
Mapeji edu enhau
ChiGerman Mbeu Mubatanidzwa: tsika dzeGerman mhando yevarimi vembatata veRussia
Boka remakambani "Kubwinya kune mbatatisi"
Unyanzvi / Tekinoroji
Kubereka uye kugadzirwa kwembeu
kuru nhau Nhau dzekambani
Zolotovskoe LLC yakapfuudza kune muridzi mutsva
в nhau, Nhau dzekambani
Bhizinesi reRostov rezvekurima Zolotovskoye LLC, raive remabhizimusi Alexei Frolov, muvambi weFlash Group yeMakambani, rakava pasi peAgrokom Holding LLC, nhengo yeAgrokom Group, Ivan Savvidi. Izvi zvinotaurwa neiyo Rostov bhizimusi portal "Guta N".
LLC "Zolotovskoe" iri munzvimbo yeSemikarakorsk, chiitiko chikuru ndechekurima mbeu dzezviyo. Zvinoenderana nekutungamira kwenzvimbo yeSemikarakorsk, nzvimbo yemapurazi ayo mahekita mazana maviri nemakumi matatu nenomwe.
Mubvunzurudzo yakaburitswa paYouTube muna 2018, director director weZolotovskoye LLC Maxim Dulya akataura kuti pamusoro pezviyo zvinorimwa, purazi rinochengeta mahekita mazana mashanu enzvimbo yemadiridziro ayo anorima miriwo - hanyanisi, mbatatisi, chibage. Mbatatisi inopihwa kukambani yeFrito Lei, chibage chinopihwa kune Tejada cannery muKuban. Mu500, iyo nzanga yakaronga kuwedzera nzvimbo yemadiridziro epasi nemahekita mazana maviri.
Source: Guta N
Tags: Rostov dunhu
Mundima yezvinhu zvitsva
Varimi vakarasikirwa nezvirimwa zvavo nekuda kwekudirwa mvura kwevhu vachabatsirwa muKhabarovsk Territory
Kuchengeta mbatatisi panguva uye mushure memaruva
Mhando dzakakurumbira dzembatatisi: "nyeredzi" dzemwaka wa2020
Kugadzira Mbatatisi muEjipitori: Zvinodikanwa Zvekunze zvinowedzera Kufarira muBiopesticides
Pringles: zvese zvakatanga nekiki, ndokuenda kune chigaro che robotic
Bazi rezvekurima rinotarisira kuti goho richadzikamisa mitengo
Mbatatisi inokura mudunhu reNovgorod
Mbatata inokura muKursk mudunhu
Mbatata inokura yedunhu reRyazan
Zviyo nembatatisi zviri kukohwewa muTajikistan
Mitengo yemiriwo yakaderera, nepo mitengo yekufambisa yakawedzera
Gwayana Weston Meijer anogamuchira chikwereti chekuvaka yechipiri yekugadzira tambo
"Potato Sisitimu" magazini 12+
Rwemukati medzidziso neruzivo rwekuongorora magazini yeanogona mabasa
LLC Kambani "Agrotrade"
Mupepeti-mukuru: O.V. Maksaeva
Maitiro / mafambiro
© 2021 Magazini "Potato Sisitimu"
Paunenge uchishandisa ruzivo paInternet uye muzvinyorwa zvakadhindwa (kusanganisira citation), hyperlink kune saiti yemagazini ye "Potato System" inodiwa.
Idzo edhisheni yekutarisa haisi kugara ichienderana nemaonero evanyori.
Inotarisira zvirimo mune zvekushambadzira vashambadzi.